Itoobiya oo fashilisay weerarro ay Al-Shabaab ka fuli lahaayeen gudaha dalkaas – Hornafrik Media Network
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa isaga oo ka jawaabayay su’aalo ay weydiinayeen xildhibaanada baarlamaanka Itoobiya, waxa uu sheegay in ay fashiliyeen weerarro ay damacsanaayeen Al-Shabaab in ay ka geystaan gudaha dalka Itoobiya.
“Al-Shabaab waxa ay dooneysay in weerarro lamid ah kuwa Kenya ay ka fuliso dalka, balse nasiib wanaag, waxaa arrintaasi diiday oo ka hortagay ciidamada ammaanka oo ku gooleystay in ay fashiliyaan” ayuu yiri Abiy.
Ra’iisul Wasaaraha oo arrimaha la weydiiyay ay isugu jireen siyaasadda, ammaanka, iyo doorashooyinka sanadkan ka dhici doona dalkaas ayaa tusaale usoo qaatay khataraha argagaxisada gaar ahaan Al-Shabaab.
Waxa uu sheegay in diyaar garow xoog leh iyo howlgallo ay sameeyeen ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay suurtagalisay in laga hortago weerarradaas lala damacsanaa gudaha dalka.
“Al-Shabaab ayaa magac ahaan la sheegay mooyee waxaa jira xoogag badan oo Al-shabaab ka baxsan oo aan aaminsanahay inay doonayaan wiiqidda amniga Itoobiya,” ayuu hadalka kusii daray Abiy Axmed.
Itoobiya waxaa hadda kusoo wajahan doorashooyin sanadkan 2020-ka, iyada oo dowladda ay la tacaaleyso wax ka qabashada ammaanka tan iyo markii uu isbadalka ka dhacay dalkaas.
Ganacsade caawa lagu dilay Muqdisho